OMG! दशैकाे मुखमै दाङबाट अायो सबैका मन रूवाउने यस्तो दुःखद खबर – PathivaraOnline
Home > समाचार > OMG! दशैकाे मुखमै दाङबाट अायो सबैका मन रूवाउने यस्तो दुःखद खबर
admin October 15, 2018 समाचार 0
माटोको ढिस्कोले पुरिएर दाङमा एकै परिवारका तीन जनाको ज्यान गएको छ । दशैँको लागि घर पोत्ने माटो खन्न जाँदा ढिस्कोले पुरिएर एकै परिवारका तीन जनाको ज्यान गएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार राप्ती गाउँपालिका–४ मौरीघाट निवासी चौधरी परिवारका तीन सदस्यको जयन गएको छ ।
प्रहरीले ३५ वर्षीय निमाकुमारी चौधरी, ३० वर्षीय श्यामकुमारी चौधरी र १२ वर्षीय रेजीना चौधरीको मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ । दसैंका लागि घर पोत्ने माटो लिन दोलइ खोलामा गएका उनीहरुको मोटो खन्ने क्रममा ढिस्कोले पुरिएर मृत्यु भएको प्रहरीको भनाई छ ।
उनीहरु सबैको घटनास्थलमै ज्यान गएको दाङका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) रामप्रसाद घर्तिमगरले जानकारी दिएका छन् । दशैँको बेलामा घर पोत्ने माटो खन्न जाँदा बर्षेनी धेरै जनाको ज्यान जाने गरेको छ । त्यसैले पनि विशेष सतर्क हरन सम्बन्धीत निकायले सबैसँग आग्रह गरेको छ । साभारpanchkhalmedia.com बाट ।
धनुषामा गो ली चल्यो, एक जना गम्भिर घाइते